I-Solar Panel LED yekhamera yangaphandle ye-WiFi - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
I-SolarIphaneli LED light yekhamera yangaphandle
Ngalesi sikhathi, singafaka isethi ye-ukuphepha ekhaya+Solar Iphaneliukukhanyisaekhaya ndawonye?
Izinzuzo ze SolarIphaneli amakhamera okuqapha: Ekuklanyweni kwezinhlelo ezishumekiwe, ukwakhiwa kwamandla kagesi amancane kusetshenziswa kakhulu kwimikhiqizo ephathekayo nephathekayo, futhi le mikhiqizo ayihlali itholakala ngogesi owanele. Imvamisa Inikwa amandla ngamabhethri, ngakho-ke ikhamera yethu yamandla aphansi icubungula yonke imininingwane ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla ukuze kwandiswe impilo yebhethri ngangokunokwenzeka.
1.Kusebenza kuzindawo ezahlukahlukene zokufakwa:
kungabhekwa endle ngaphandle kukagesi (imigwaqo yasemakhaya, izindlu zasemapulazini, izindlu zokuhlala, amachibi ezinhlanzi, izingadi zezithelo, izindawo zokwakha, izimayini, njll.).
2.Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi:
Lapho othile edlula ngamamitha ayi-5-8 ebangeni lokuvezwa kwekhamera.
ikhamera izovuka kungakapheli umzuzwana ongu-1, iphile ukuqoshwa kwesikhathi sangempela, bese ithumela i-alamu kuhlelo lokusebenza leselula ukusunduza ngenkuthalo imininingwane ye-alamu kumsebenzisi. Uma kungadluli muntu, ikhamera ikwimodi yokulinda futhi isebenzisa amandla aphansi.
Solarlow-power surveillance camera-ukuphepha ekhaya-product features:
1.Ukuzivikela okufihliwe: yenza umuntu ongenayo ukuthi abe ne-alamu ngokungazi.
2.Qedela amakhono okuvikela:
Sula ividiyo, i-engeli ebukwayo ebanzi, namandla okubona ebusuku.
3.Izici ezinhle zokulwa nokuphazamiseka:
Lapho izinambuzane noma izilwane ezincane zidlula ikhamera, azikwazi ukuvimba ngokuphelele isigxobo sokuzivikela, ngakho-ke ngeke kwenziwe i-alamu yamanga.
4.Ukudluliswa okuhle kakhulu:
Ungabuka futhi usebenze zonke izikrini zokuqapha ekhaya ngocingo noma ikhompyutha endaweni ekude.
5.Umsebenzi omuhle kakhulu we-alamu:
Lapho othile engena endaweni yokuqapha, uhlelo luzoshaya ngokuzenzakalela, lithumele izikhumbuzo, futhi lunikeze umsebenzisi okhethiwe wefoni ephathekayo. Ngemuva kokuthola ucingo lwe-alamu nolwazi, umsebenzisi okude angahlola isikrini sokuqapha ngefoni noma ithebhulethi ephathekayo ye-Intanethi, bese eqala ngasikhathi sinye umsebenzi wokuqopha ividiyo ngefoni ephathekayo nokusingatha izimo ze-alamu.
6.Indlela elula yokufaka:
Akekho umuntu okhethekile odingekayo ukuyifaka, ukulanda uhlelo lokusebenza nokuyifaka ngokuya ngezinyathelo ngaphandle kwezindleko zokufaka.
Ukutholwa komzimba we-PIR + ukuzwa i-radar, uma othile ephakathi kwebanga le-alamu, uhlelo luzoshaya ucingo noma luthumele umyalezo wokukhumbuza ngocingo oluphathekayo, ukuze isela lingenandawo yokucasha.
Although we now say that people will be responsible for the public security in rural areas, but it is still unwilling to happen when someone encounters a burglar and affects personal and property safety. Rural families may not be able to prevent such cases, but if you install a solarukuphepha ekhaya product in your home, if you really encounter such things as burglary, we have a greater chance of catching the bad guys. So from another point of view, the use of ukuphepha ekhaya products is still very necessary!